Intlanzi iRoteña, isitya esiqhelekileyo saseAndalusi esivela kumasipala waseRota (eCádiz) | Ukupheka kweKhitshi
Namhlanje bendifuna ukukubonisa isitya esiqhelekileyo esivela kumasipala wase-Andalusi waseRota, kwiphondo laseCádiz. Imalunga nobubi bakho roteña intlanzi, un intlanzi Eyoyikisayo ekhatshwa yimifuno emininzi ukunika leresiphi impilo.
Ngoku kufuneka uzikhathalele, utye usempilweni kwaye usempilweni ukugcina i-tipito, kuba imihla yolwandle kunye nemivalo yaselwandle izakufika kungekudala, apho silala khona elangeni ukuze sigwele xa siphumle.
Eminye isinqe esimhlophe.
1/2 ipepile ebomvu.
1/2 ipepile eluhlaza.
3 iitumato ezibomvu.
Le recipe yeRoteña yintlanzi kulula kakhulu ukuyenza nokuba iqulethe izithako ezininzi. Kuqala siza kusika zonke imifuno kaJulienned kwaye, igalikhi, siya kuyinqunqa ngokugqibeleleyo.
Emva koko, siza kufaka ifayile ye- iskillet i-drizzle efanelekileyo yeoli yeoli. Xa kushushu, siza kufaka igalikhi. Xa zimdaka ngegolide siya kongeza itswele kwaye, kamva, iintlobo ezimbini zepepile. Xa sibona ukuba yonke into ifakwe kancinci, siza kuyongeza itamatato kwaye siyivumele ipheke ide yonke into ifakwe poached. Kuyacetyiswa ukugubungela ipani ukuze ivele ngokukhawuleza.
Emva koko, siya kongeza isiqingatha seglasi Iwayini emhlophe kwaye, xa utywala sele bukhuphukile (ubilise), siya kongeza iifillets zentlanzi kunye neziqholo, ityuwa, ithyme kunye nepepile emnyama yomhlaba.
Okokugqibela, siyakuvumela iintlanzi zipheke kule wayini kunye nesosi yemifuno ezimbalwa Imizuzu ye5 kwaye ulungele ukutya! Ndiyathemba ukuba uyasithanda esi sidlo seRoteño.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Hake papillots kunye neminqathe kunye neelike
Ixesha lokulungiselela Imizuzu ye15
Ixesha elipheleleyo Imizuzu ye25
Iikhilokholi ngokusebenza 213
Ukupheka kweentlanzi, Iiresiphi ezisempilweni
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Ukupheka kweentlanzi » Iresiphi yentlanzi iRoteña, isitya esiqhelekileyo sikaRota (Cádiz)
Ndizokuthenga intlanzi kwaye ndilandele iresiphi yakho. Ngokuqinisekileyo isebenza kakuhle kum. Enkosi!!!!!!
I-Lasagna enenyama kunye nepate, ilula kwaye imnandi
Amaqanda ane-bechamel, isidlo sangokuhlwa esikhulu sabantwana